Ubuntu beScorpio: Yonke into okufuneka uyazi malunga nomqondiso wakho - Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi
Ukuba uyinzalelwane yalo mqondiso, ufanele ukwazi ukuba ungomnye wabalinganiswa abantsokothileyo nabangaqondakaliyo bezodiac. Ubuntu bakho bufana nobunye kwaye buthatha isigqibo ngokugqithisileyo kwaye bunochuku. Ukuvakalisa ngomdla, amandla, ubukhali kunye nemvukelo zezinye zezona zichazi zibalaseleyo zokukuchaza. Ubuntu beScorpio bucebile kwaye bunomdla kakhulu, ukuba kukho into entsha yokufunda malunga nabo. Ewe, nobabini ninomdla kwaye ninentloko epholileyo, kodwa ukufuna kwenu ukuchasana nokuthobela kukuqhubela phambili.
Iinyaniso ezibalulekileyo malunga nobu buntu
Luthetha ntoni olu phawu lwezodiac?
Bunjani ngokwenene obu buntu kwaye yintoni imihla?
Zeziphi iimpawu ezibalaseleyo zolu phawu?
Kuthekani ngeentsilelo zabo?
Kuthekani ukuba uphawu lwam lokunyuka luyiScorpio?
Ngoobani abahambelanayo eluthandweni?
Iinyani ze-S T ezikhethiweyo malunga nobuntu beScorpio
Apha zi Iinyani ezili-15 malunga neScorpio ukuba kufuneka uyazi!
Imihla yeZodiac: Ngo-Oktobha 23 ukuya kwi-21 kaNovemba
Iiplanethi ezilawulayo: Mars kwaye Pluto
Amanqaku anamandla: Ubuchule, uyazingisa
Iimpawu: Ukuhambelana, ukunyaniseka
Amatye anqabileyo: Garnet, Ruby
Imibala: Ebomvu, engwevu
Amalungu omzimba ahambelanayo: Amalungu esini
♏Imela ntoni isimboli sikaScorpio? ♏
I-Scorpio luphawu lwesibhozo lwe-zodiac kunye nolunye lwe-3 Iimpawu zamanzi . Xa ujonge olu phawu lweenkwenkwezi, ulwamvila lomsila kanomadudwane lujonge phezulu emele umnqweno wokujolisa phezulu. Abantu bomthonyama bophawu lokuzimisela okungapheliyo kunye nomdla, okuthetha ukuba akukho maphupha okanye iinjongo zinkulu kakhulu kubo!
NgeMars kunye nePluto njengeeplanethi zakho ezilawulayo, ithuku lakho likushukumisela ukuba uziveze ngokuthanda phila ngokweemvakalelo zakho. Ukuziphatha kunye namandla kukukhokela kodwa umoya wakho ungaphezu kwayo yonke into evukelayo, echaseneyo kunye nokugxeka. Kubudlelwane bakho nabanye, ngamanye amaxesha uvumela ubundlongondlongo kunye nomona ubonakalise kodwa ngethamsanqa ukulunga kwakho kukuvumela ukuba uzibuze.
Imihla kunye nobuntu beScorpio: ukusuka ngo-Oktobha 23 ukuya kwi-21 kaNovemba
I-Scorpio luphawu olunomdla kwaye lunomdla wokuvumisa ngeenkwenkwezi, kunye naba bantu bomthonyama, yonke into kufuneka iphile ngamandla kwaye kwi-100mph. Nokuba kubudlelwane babo, imisebenzi yabo okanye izinto abazithandayo, aba bantu ngokwabo kakhulu kwaye bathatha yonke into entliziyweni. Baziveza ngenzondelelo ekufuneni rhoqo ukungahambelani kunye nomnqweno onobundlobongela wokufikelela emazantsi ezinto, ngamanye amaxesha ubabeka kwiimeko ezinobungozi.
Aba bantu bomthonyama baphila ngokunzulu iimvakalelo zabo; batyekele ekuthandeni ekuqaleni kodwa nasekuphalazeni igazi... Kubudlelwane babo nabanye, maxa wambi bavumela okuthile ubundlongondlongo kunye nomona kuvela; kodwa ngethamsanqa lucidity yabo ukuba babuze ngendaleko yabo yexesha elizayo. Aba bantu ngokuqhelekileyo baziwa ngabo ubulili babo obunamandla, umnqweno, kunye nothando, iimpawu zobuntu ezibenza babe bukhali kakhulu abathandi bezodiac .
Intshukumo ecothayo yePluto, iplanethi yesiphithiphithi kunye notshintsho, isikelela aba bantu bomthonyama ngokuzola noxolo. Kudla ngokuthiwa aba bantu babukhali kuba bayayiqonda indaleko yendalo iphela. Baziinkokeli ezibalaseleyo ngenxa yokuzinikela kwabo kuyo yonke into abayenzayo. Iingcamango zabo ezinamandla kunye ne-verve zibenza bakwazi ukufikelela utshintsho kwinqanaba elikhulu.
Ngenxa yesimo sabo senkalipho, aba bantu bomthonyama banokuba ngabahlobo ababalaseleyo, kodwa kufuneka bafunde ukungazifihli kangako kwaye babelane ngeemvakalelo namaphupha abo nabo babangqongileyo. Iimvakalelo kunye neengcinga zabo zininzi kakhulu, ke kuya kuba nzima kuwe ukufumanisa yonke into malunga nabo kubomi obunye...
>> Funda i Ihoroscope yeScorpio ngo-2021 Apha<<
Ziziphi iimpawu ezintle zobuntu beScorpio? - Aba bantu bomthonyama banyanisekile kwaye bazimisele
Aba bantu bomthonyama bazele ziimpawu kwaye banamandla amangalisayo okubuyela umva nokuvuka eluthuthwini. Bayakwazi ukujongana nezona ngxaki zinzima kwaye nezona qhwithi zimbi kakhulu azinakuze zimfumane. Ukungaphumeleli akuyi kubabamba kuba banamandla amangalisayo engqondo okubavumela ukuba bavuke kwakhona. Aba bantu bagcwele ingqibelelo kwaye benzela abahlobo abathembekileyo nabanyanisekileyo onokuthi ubafowunele nangaliphi na ixesha.
Unokuzithemba iinkxalabo zakho kubuntu beScorpio ngaphandle koloyiko kuba baya kwenza njalo Ungaze ukungcatshe kwaye uhlala ekunika indlebe ebukhali. Olunye umgangatho obalaseleyo wale zodiac licala labo elinomdla! Ngabo, ubomi abusoze bube buthuntu kwaye ngokuqinisekileyo baya kukwenza uzive uphila ngakumbi kunangaphambili. Obu buntu buyayazi indlela yokulawula iingxaki njengokuba kungekho mntu wumbi! Aba bantu yenza abahlobo abanyanisekileyo nabanyanisekileyo; kangangokuba unokubatsalela umnxeba nangaliphi na ixesha emini okanye ebusuku yaye baya kuhlala bephendula. Olunye lweempawu zabo ezintle licala labo elinomdla! Ngabo, ubomi abusoze bube buthuntu kwaye uya kuhlala uziva uphila ecaleni kwakhe.
Ulangazelelo lwabo lokhuphiswano luthetha ukuba bahlala beqalisa izinto ezintle ezishiya iinkumbulo ezintle. Umgangatho wabo wokugqibela kukuzimisela kwabo; xa befuna into, abayi kuyenza nantoni na ukuze bayifumane!
Baziinkokeli ezinamandla kwaye banobuntu obubukhali kakhulu. Bazimisele kakhulu kwaye ngenxa yokuzinikela kwabo bahlala bebona izinto kude kube sekupheleni. Iingcamango zabo ezinamandla kunye namandla athetha ukuba banako ukuphumelela kwinqanaba elikhulu. Ngenxa yendalo yabo enesibindi, benza abahlobo abakhulu kunye nabadlali beqela.
Zeziphi iimpazamo ezinkulu ezinxulumene nobuntu beScorpio? -Aba bantu banokuqhushumba...
Akukho mntu ufezekileyo, kodwa wonke umntu unokuphucula! Njengenye ye iimpawu zodiac ezinomsindo , umoya wabo ovuthayo ngamanye amaxesha unokuba ugqithise kakhulu. Siyalithanda icala labo elinomdla kodwa iimpembelelo zabo ngamanye amaxesha kunzima ukuzilawula. Ukuziphatha kwabo okugqithisileyo kuhlala kubabeka kwiimeko ezingenakwenzeka kwaye kukhokelela kuxinzelelo oluninzi kubahlobo babo kunye nosapho.
Esinye isiphako esincinci buburhalarhume babo! Ewe, ukuba umntu uthetha into angayithandiyo, uye ayenze ukuba ndlongondlongo ngokuthetha nangokwasemzimbeni ngaphandle kokuqaphela. Aba bemi bomthonyama bakwaziwa ngokuba nobuchule bokwenza izinto kwaye badume ngokuba ngamachule amahle, ukanti basoloko benyolukela igunya nolawulo!
Kuthetha ukuthini ukuba neScorpio njengophawu lwakho lokunyuka?
Ukuba Ukunyuka kweScorpio kwitshathi yakho yendalo ikunika a incasa yomngcipheko kodwa kunye nokufunyanwa. Ke, uya kuhlala ufuna ukodlula isiqu sakho, ukufunda kunye nokuvela. Oku kunyuka kukwenza ulungelelanise kakhulu, oku kuthetha ukuba uyakwazi ukumelana nazo zonke iintlobo zeemeko. Lo mba uyakwenza nawe nesibindi kwaye yomelele ngokwaneleyo ukubuza yonke into.
- Bala uphawu lwakho olunyukayo Apha -
Ngoku ekubeni usazi esonyukayo, fumana ubuntu bakho ngokweenkcukacha ngakumbi:
I-Aries ilanga i-Scorpio iphuma
I-Taurus ilanga i-Scorpio iphuma
I-Gemini ilanga i-Scorpio iphuma
Umhlaza ilanga iScorpio iphuma
Leo ilanga iScorpio liphuma
Virgo ilanga iScorpio iphuma
Libra ilanga Scorpio liphuma
I-Scorpio ilanga I-Scorpio iyanyuka
I-Sagittarius ilanga i-Scorpio iphuma
Capricorn ilanga Scorpio enyuka
I-Aquarius ilanga i-Scorpio iphuma
I-Pisces ilanga i-Scorpio iphuma
Ukuhambelana kweScorpio : Ngowuphi umdlalo wabo ongcono?
Olona phawu luhambelanayo neScorpio nguMhlaza. Le miqondiso zenziwa omnye komnye kwaye ngokwenene oko kuthatha ukuya umgama kubudlelwane. Bazisa okona kulungileyo omnye komnye kwaye bahlala bekwi-wavelength efanayo xa kufikwa kwizigqibo ezinkulu. I-Scorpio nayo yenza isibini esihle kakhulu kunye neePisces. Phakathi kwabo akukho mfuneko yakuthetha ukuqondana, kuba aba bantu babini bomthonyama babambana ngethuku, kungekho mfuneko yokuba bazichaze rhoqo.
Imidlalo yabo engcono yile:
Scorpio + ukuhambelana Cancer - Benza isibini esigqibeleleyo.
Scorpio + Pisces ukuhambelana - Esi sisibini somlingo.
Ukuhambelana kweScorpio + Taurus -Le yi-duo enye!
Iqabane elifanelekileyo lobomi beScorpio ngumntu owonwabileyo oya kukwazi ukuqonda nokwamkela izinto azithandayo. Aba bantu bomthonyama baya kuxabisa umntu ongaqondakaliyo, oxabisa umdlalo omhle wekati kunye nempuku.
Ngoobani abangavaniyo nabo?
Lo mqondiso uthathwa ngokuba yi Ubuncinci uphawu lwezodiac oluhambelanayo kunye noLeo kunye noAquarius . U-Leo kunye no-Aquarius bobabini bayazi kakuhle indlela yokutyhala amaqhosha e-Scorpio kwaye bawenze ukuba aqhume. Ukuba i-Scorpio yenza i-Leo okanye i-Aquarius, izinto mhlawumbi aziyi kuhlala ixesha elide kwaye kunokwenzeka ukuba kubekho idrama eninzi.
Sityhila iimpawu ezingakumbi kwividiyo yethu engaphoswanga:
Iinkcukacha ezingakumbi ngalo mqondiso:
Ngoku ukuba ufunde kolu phawu lwenkwenkwezi, i-ST icebisa ukuba uye kwelinye inyathelo kwaye ujonge wonke lo mxholo mkhulu:
Ngaba uthandana nenzalelwane yalo mqondiso? Apha ziIzizathu ezi-5 zokuwela kwiScorpio
Sebenzisa iingcebiso zethu kwi indlela yokutsala indoda yeScorpio
Ngaba olu phawu lulungile ebhedini? Fumana i Iprofayile ye-Scorpio ngokwesondo
Ngaba olu lolona phawu ludumileyo? Fumana impendulo kuyo Loluphi uphawu lwezodiac oluxhaphakileyo?
UNithaiah, iNgelosi enguMlondolozi ebonelela ngonyamezelo